Ilay Ray adala – Tsodrano
Ilay Ray adala
TENY ho vakiana
Josoa 5 : 10-12
2Koritiana 5 : 17-21
Lioka 15 : 1-3 , 11-32
Nomena anarana hoe : ny fanoharana momba ny « Zanaka adala » hatramin’izay ity fanoharana nataon’i Jesosy ity. Nefa raha fakafakaina dia azo omena anarana hoe : ny fanoharana ny amin’ny ray adala. Ray nanana zanaka roa izay tena tiany. Io ray io no mitana ny toerana lehibe ao amin’ny tantara, ka nitia sy namela izay fahaditrana rehetra nataon-janany.Raha tantara an-dapihazo izy ity dia lazaitsika fa misy acte roa. Raha tantara mitohy na feuilleton dia misy episode roa.
Ny Acte voalohany dia azotsika omena lohateny hoe : « Ny fihetsik’ilay ray manoloana ny faralahy. Ny mpilalao voalohany eto dia ilay faralahy.
Fetsilahy io faralahy io. Notakiany ny fanana izay tsy azy akory sady tsy nisasarany. Hoy izy : « Raiko omeo ahy ny fananana tokony ho ahy ». Azon-dray natao tsara ny nilaza hoe : »Tsy misy anao eo fa ahy daholo koa inona no tadiavinao ». Nefa noho ny adalan-drainy dia nomeny azy ny fananana. Noraisiny ilay zanaka adala ny fananana tsy nisaotra an-drainy akory izy zavatra tsy hainy izany. Ny hainy dia ny nitaky sy ny mandany. Rehefa lany ny fananany dia voalaza fa nitodika ny sainy. Toa namboarin’ny mpitantatara ihany ny fiovany. Fa rehefa dinihantsika dia toa ny kajy be ihany izany. Matin’ny hanohana ranamana ka dia nitady izay hamenona kibo. Any amin’i Dada misy koa nahoana no hihafy eto. Fitiava-tena ihany no betsaka tao aminy. Nefa aza dia mitorabato azy isika satria mampalahelo izy. Koa mila olona hitia azy
Ary izany no nataon’ilay mpilalao faharoa dia ilay ray nolazaitsika hoe ray adala teo. Mifanohitra tanteraka amin’ilay zanany izy. Manome sy feno sy tanteraka izay hananany. Vao nagatahan’ilay zanaka ny anjara tokony ho azy dia tsy nisalsala fa nanome. Nefa olona tadiavina ho lovana mbola velona izao. Nony efa niverina indray ilay zanaka dia fihetsika efatra no hitatsika nataony : « Mbola lavitra dia efa hitany ilay zanany… Onena azy izy… ary nihazakazaka nanatona azy ary dia nanoroka azy. Tsy vitan’izay fa mbola nanomana fety ho an’ity zanaka adala ity indray « Omeo azy ny akanjo tsara indrindra… ny peratra…sy kapa. Ary dia vonoy ilay omby nafahy efa nomanina ho fandraisana azy.
Izany no sarin’Andriamanitra tian’i Jesosy ho fantatsika. Fa nahoana moa no sarin’Andriamanitra masika no tavela mazàna ao an-tsaitsika ? Andriamanitra heveritsika fa Andriamanitra mpanafay ka tsy nahita afatsy ny ratsy ho an’ny mpanota. Izany Andriamanitra izany tsy Andriamanitr’i Jesosy izany. Ny Andriamanitra asehony antsika dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra adalam-pitiavana antsika. Andriamanitra manome ny soa na dia ho an’ny ratsy fanahy aza. Andriamanitra miandry foana ny hiverenan’ireo nania niala taminy.
Fa ilay zokiny koa rehefa tsy nanaiky ny hiditra tao amin’ny fanasana dia tsy mahafantatra ny fitiavan’ity rainy. Tahaka ilay zandriny dia mitaky koa izy : » Tsy mba nomenao zank’osy akory aho… » Fampitahy no nataony. Ny an’ny zandriny omby nafahy ny azy zanak’osy kely aza tsy azony. Mitovy amin’ny fariseo izay mpanaraka an-jamabany ny fivavahana ity zokiny. Ary satria mihevitra ho nahavita noho ny hafa dia mitaky misimisy kokoa noho ny hafa. Ray comptable no niheverany ny rainy ka tokony hanome azy mihoatra noho ny zandriny.
Ilay ray anefa tsy mijery vola sy fananana fa fitiana no noresahany. « Hianao anaka dia eto amiko mandrakariva ka izay ahy dia anao…. »Ary dia tahaka ny nataony tamin’ilay faralahy dia nivoaka nitsena ity zokiny koa izy. Ary dia niangavy azy mba hiditra.
Eto koa dia nasehon’i Jesosy ilay Andriamanitra fitiavana. Ilay Andriamanitra tsy mitsahatra ny mitia ny zanany. Mitovy daholo fa samy mpanota ny zanany nefa dia samy tiany.
Dia avelatsika handalo fotsiny ve izany fanoharana nataon’i Jesosy izany ?
Vonona ny hanaiky ho tiavan’ilay Andriamanitra tia antsika ve isika. Sa dia ny hijery foana an’Andriamanitra ho miangatra na masika no titsika.
Tapaka tampoka ilay tantara fa tsy fantatra izay niafarany na nandroso ihany niditra niara-paly ilay zokiny na tsia. Nataon’ny mpitantara ho anjaratsika no manohy izany tantara izany. Ho tohizatsika amin’ny fandroson’ilay zokiny hiditra hiara-paly amin’ny nasaina ve ny tantaratsika sa ? Antsika no nahohy azy.
Mibebaha mba ho velona
Aza manota intsony
Posts by Laza RAFENONIRINA
LANVIN André, mpitandrina
FAHATSIAROVANA NY FAHA-175 TAONA NANDEFONANA AN-DRASALAMA
Fa ny Tompo
Iza no hanokatra ny làlana ?
Comments by Laza RAFENONIRINA
Tsara ho Fantatra (46)
Retrouvez tous nos articles depuis l’année 2002. Sélectionner un mois février 2021 (1) janvier 2021 (1) décembre 2020 (2) novembre 2020 (2) octobre 2020 (1) septembre 2020 (1) août 2020 (1) juin 2020 (2) mai 2020 (2) avril 2020 (2) mars 2020 (2) février 2020 (2) janvier 2020 (2) décembre 2019 (6) novembre 2019 (4) octobre 2019 (2) juin 2019 (2) mai 2019 (1) avril 2019 (6) mars 2019 (1) février 2019 (1) décembre 2018 (5) novembre 2018 (1) août 2018 (2) juillet 2018 (2) mai 2018 (2) avril 2018 (1) mars 2018 (8) février 2018 (2) janvier 2018 (4) décembre 2017 (6) novembre 2017 (1) octobre 2017 (1) septembre 2017 (1) août 2017 (3) juillet 2017 (2) juin 2017 (7) mai 2017 (2) avril 2017 (4) mars 2017 (2) février 2017 (1) janvier 2017 (1) décembre 2016 (2) octobre 2016 (1) juillet 2016 (1) juin 2016 (1) mai 2016 (2) mars 2016 (2) février 2016 (6) janvier 2016 (2) décembre 2015 (5) novembre 2015 (1) octobre 2015 (2) septembre 2015 (2) juillet 2015 (1) avril 2015 (3) février 2015 (3) janvier 2015 (4) décembre 2014 (3) novembre 2014 (4) octobre 2014 (1) août 2014 (1) mai 2014 (1) avril 2014 (6) mars 2014 (3) décembre 2013 (1) novembre 2013 (1) octobre 2013 (2) août 2013 (6) juillet 2013 (3) juin 2013 (3) mai 2013 (2) avril 2013 (1) mars 2013 (6) février 2013 (4) janvier 2013 (2) août 2012 (5) juillet 2012 (5) juin 2012 (3) mai 2012 (3) avril 2012 (7) mars 2012 (3) février 2012 (2) janvier 2012 (3) décembre 2011 (3) novembre 2011 (2) octobre 2011 (5) septembre 2011 (4) août 2011 (1) juillet 2011 (6) juin 2011 (5) mai 2011 (4) avril 2011 (7) mars 2011 (1) février 2011 (1) janvier 2011 (3) décembre 2010 (2) novembre 2010 (1) octobre 2010 (1) septembre 2010 (3) août 2010 (1) juillet 2010 (6) juin 2010 (1) mai 2010 (3) avril 2010 (1) mars 2010 (5) février 2010 (4) janvier 2010 (6) décembre 2009 (2) novembre 2009 (3) octobre 2009 (3) septembre 2009 (1) août 2009 (1) juillet 2009 (1) juin 2009 (2) mai 2009 (5) avril 2009 (10) mars 2009 (4) février 2009 (5) janvier 2009 (7) décembre 2008 (5) novembre 2008 (6) octobre 2008 (3) septembre 2008 (4) août 2008 (4) juin 2008 (1) avril 2008 (1) mars 2008 (1) février 2008 (1) janvier 2008 (2) décembre 2007 (1) novembre 2007 (1) août 2007 (3) juin 2007 (4) mai 2007 (1) avril 2007 (1) mars 2007 (4) février 2007 (4) janvier 2007 (7) décembre 2006 (9) novembre 2006 (4) octobre 2006 (7) septembre 2006 (4) août 2006 (2) juillet 2006 (4) juin 2006 (3) mai 2006 (5) avril 2006 (7) mars 2006 (11) février 2006 (8) janvier 2006 (9) décembre 2005 (10) janvier 2005 (1) septembre 2004 (2) août 2004 (3) juillet 2004 (5) juin 2004 (4) mai 2004 (2) avril 2004 (6) mars 2004 (2) février 2004 (3) janvier 2004 (5) décembre 2003 (4) novembre 2003 (6) octobre 2003 (1) mai 2003 (4) avril 2003 (17) mars 2003 (1) février 2003 (4) décembre 2002 (3) novembre 2002 (1) octobre 2002 (6) septembre 2002 (4)
Ny Karemy 26/02/2021
157 813 visites